Lalan'ny Railway sy sary lehibe
Ny sarety, izay ohatra tokana tokana an'ny Trano Fotsy izay nampiasain'i Atatürk nandritra ny dia tany an-tanindrazana (1935-1938) dia naseho nanomboka tamin'ny 1964 tao Ankara Garda teo akaikin'ny "Museum Atatürk sy Railway amin'ny Ady Fahaleovantena". Minisiteran'ny Kolontsaina [More ...]
NORD DRIVESYSTEMS dia manetsika ny tafo amin'ny tontonana solar azo nirehitra voalohany eran'izao tontolo izao tany amin'ny toeram-pitsaboana fako any Chur, Soisa. Iray amin'ireo mpamorona haitao teknolojia malaza amin'ny sehatry ny vahaolana mekanika sy elektronika [More ...]
Manan-tantara ara-tantara Paşabahçe Ferry Pulls mankany Haliç ho an'ny fanavaozana
Raha niandry andro fantsom-bola tany amin'ny morontsirak'i Beykoz, Paşabahçe Ferry ara-tantara, izay nafindra tany amin'ny City Lines niaraka tamin'ny tetik'asa IMM, dia nanomboka nisintona ho any amin'ny Haliç Shipyard ho fikojakojana sy fanamboarana. Ny sambo haverina hamerina dia miverina amin'ny Bosphorus sy [More ...]
Ny fiara fitateram-bahoaka dia voapoizina ao Konya
Konya Metropolitan Munisipaly dia manatanteraka asa disinfikan'ny fiara fitateram-bahoaka mitondra olona an'aliny maro isan'andro. Ny ekipa mifandraika amin'ny Sampana Konya Metropolitan munisipaly momba ny fiarovana sy ny fifehezana ny tontolo iainana dia nitombo ny gripa sy ny areti-mifindra [More ...]
ANKARAY Nandeha tamina fanadiovana trano ny mpandeha
Ny departemanta générale d'Études an'ny EGO dia nanomboka nanao fanadiovana anatiny sy ivelany ny fiaran-dalamby 33 nampiasaina tao ANKARAY niaraka tamin'ny fanadiovana ny crème. Mitondra mpandeha 110 XNUMX eo ho eo isan'andro ary [More ...]